KWENZEKA NTONI NGOBAWO? - IINDABA
Kwenzeka ntoni ngoBawo?
Ubusuku bobusuku yindawo yaseMelika eyoyikisayo yokusasaza ii-miniseries ezenziwe kunye nezikhokelwa nguMike Flanagan weNetflix. Isamente iqulathe uZach Guilford, Kate Siegel, Hamish Linklater noRahul Kohli.
Iindawo zokuqokelela zijikeleze iqela lesiqithi esikude esiba namava angaphezu kwendalo emva kokufika kombingeleli ongaqondakaliyo. Ingqokelela yasungulwa kwiNetflix ngoSeptemba 24, 2021.
Kwisiqendu 1, sibona imeko apho umntu ongaqondakaliyo engena kwikhaya lomfundisi. Utyibilika ngesifuba esikhulu emhlabeni aze avule. Imicimbi engaqhelekanga iyenzeka. Kwisiqendu sesi-7, uMonsignor Pruitt uthi wanyoba kwaye waxoka ekuthuthumbiseni u-Angel oqulethwe esiqithini esiya kwisiQithi seCrockett.
usana olukhulu olunomsindo 6
U-Annie, ongathandabuzeki ukuba unokufezekiswa ngantoni, unikezela ukuphuma njengesiphazamiso, njengoko ethanda ibinzana noBev Keane. Kungumzuzwana omangalisayo ngesibini esibuhlungu njengoko sonke sisazi ukuba u-Annie akanakulunga ekuqubaneni kwakhe.
Kodwa, njengokuba u-Erin kunye nabaselula begijima ngendlela yefestile kwakhona, u-Annie ekugqibeleni uxelela u-Bev into afuna ukuyimamela-ukuba akangomntu uzimeleyo, akalilo iqhawe, kwaye uThixo akamthandi kakhulu kunaye. uthanda omnye umntu.
Kulixesha lokuba umntu axelele uBev ukuba yintoni leyo. Emva kokuthetha iingcinga zakhe, u-Annie wanciphisa umqala wakhe, wakhanyela ukoneliseka kokuvumela nabani na ukuba amkhuphe, kwaye u-Bev wazithoba (eneneni) kwinto ebubulwanyana awathi ngawo onke amaxesha angaphezulu. wazenza, waguqa ngamadolo kwaye wangenisa igazi lika-Annie.
joe jo kunye no-olivia thai
Ngexesha lobunzima obushiyekileyo kwiNcwadi VI: iZenzo zaBapostile, utata uPaul utyhila abalandeli bakhe ngokwenyani. Emva koko wathabatha inkolo yabo inyathelo elongezelelekileyo, wabatyhilela ingelosi kwaye wabanika igazi lakhe.
Olo tshintsho aluhambanga kakuhle. Ngelixa isiqingatha samalungu siwele emazantsi egutyungelwe ligazi, icala elichaseneyo libukele kuloyikeka phakathi kwala maza okutshatyalaliswa kunye nedemon enokubakho ngaphambili kunabo.
Kodwa yayinguMildred Gunning (uAlex Aso), intombazana eyayifudula inesifo sengqondo esixhalabisayo nangona kunjalo yayisandula ukuvuselelwa ngendlela yegazi eliyingelosi elifihlakeleyo, elathathayo. Ephethe umpu kaSheriff Hassan (uRahul Kohli), udubula uPari, ugqithiselo olujika inkonzo yecawe ibe sisiphithiphithi.
Ingelosi yambamba uMildred yaza yabhabha yemka nje ngaphambi kokuba kuphalazwe igazi. Amalungu angafiyo ecawa aqala ukuhlasela amalungu abantu, ejika icawa ibe yindawo yokulwa.
rock ixesha le-2 uvavanyo lwendlu
Amalungu ambalwa ayekwazile ukubaleka, nangona kunjalo ayitshintshanga inyani yokuba yayiyimfazwe yonke. Umntu unokucinga-njengoko i-TheWrap yenzayo-ukuba umgca kaLisa uthetha ukuba iNgelosi ayikhange ihambe ngexesha kwaye yongezwa ngokutshiswa lilanga, ngaphandle kwescreen, kwaye ke ngesidalwa sasezulwini. Nokuba yeyiphi na into egazini emenza akwazi ukusebenzisa imilenze yakhe iyekile ukusebenza kuye.
Nangona kunjalo, xa i-TheWrap ichonge umbhali wobusuku bobusuku uMike Flanagan, ongoyena ungungqondongqondo emva kweNetflix's The Haunting of Hill House kunye neHunting yaseBailey Manor, besicinga ukuba kukuphela kwakhe, besixelelwe ukuba umbono wethu ububuxoki. Kodwa uFlanagan uyayithanda loo nto yokufunda kwakho, ke ungalahli inkolo ukuba ibikukuthatha kwakho oko.
Izigaba: Iindaba Amazon-Prime Hulu
UJohn swartzwelder entsha yorker
kwenzeka ntoni kulaura bannon
U-eileen guggenheim ujeffrey epstein
amanda kimmel parvati nzulu
Ngaba i-walgreens pharmacy ivulekile ngosuku lomsebenzi